BIXIYAYAASHA ugu fiican ee taleefanka gacanta ee hawlwadeenada | Androidsis
Hawl wadeenada taleefanka
Waxaa jira tiro badan oo ah wadayaasha telefoonka, maanta qaarkood ayaa si fiican looga yaqaan kuwa kale, shirkadaha halkii la dejin lahaa iyo kuwa kale ee la shaqeeya kooxaha kale ee ajaanibta ah. Inta badan kuwan hawl wadeenada Waxay si aad ah ugu fiican yihiin suuqa, qaarkoodna waa hogaamiyaasha taraafikada ee wadamada qaar iyo kuwa kale ee dibada ah. Goobtan waxaad ka heli kartaa macluumaad la xiriira wadayaasha telefoonka in aan heli karno, si aan u ogaanno siciradooda iyo dalabyadooda ayaa ah ikhtiyaar weyn oo aan ku dooran karno midka aan dooneyno inaan la xaajoono.
Ku soo bandhigida telefoonka
Hoos waxaad kaheli doontaa dalabyo fiican oo taleefan ah oo lalahelayo shirkadaha mobilada ugu waaweyn (Movistar, Orange, Vodafone, Amena iyo kuwa kaloo badan) sidaa darteed sameynta xayeysiinta cusub ama diiwaangelinta ayaa ka jaban Ka faa'iideyso qiimo dhimista oo waxaad ku heleysaa mobiles ka jaban dalabyadan:
Hagaaji daboolida mobilada: tabaha, dhiirrigelinta iyo tabaha
by Qolka Ignatius samee Sannadka 1 .
2020 waa sanadkii ay 5G daboolistu bilaabi doonto inay dhab ka noqoto wadamada qaarkood sida Spain, ...
Sida loo qaabeeyo APN si ay u hesho xog moobil
by daniplay samee 2 sano .
APN (Access Point Name) waa magaca barta marinka ee maanta lagu habeeyay ...
Vodafone waxay keentaa 5G oo wareegaya 55 magaalo oo Yurub ah
by Eder Ferreno samee 3 sano .
Vodafone waa shirkadda 5G gaysay dhowr waddan oo Yurub ah toddobaadyo yar, oo ay ka mid yihiin ...
5G wuxuu yimid Isbuucaan Isbuucaan isagoo ka yimid Vodafone
Dhowr toddobaad ka hor ayaa la xaqiijiyay in Vodafone uu 5G u keenayo Yurub xagaagan, sidii horeyba ...
Kuuriyada Koonfureed waxay horeyba u haysatay ku dhowaad 1 milyan oo isticmaale 5G ah
by Haaruun Rivas samee 3 sano .
Dalkii ugu horreeyay ee leh shabakad ganacsi 5G wuxuu ahaa Kuuriyada Koonfureed bishii Abriil. Saxeexyada sida ...
Vodafone waxay bixisaa adeegga shabakadda 5G ee shan magaalo oo ku yaal Talyaaniga
Nidaamyada shabakadda 5G waxay sii wadaan inay sii ballaariyaan adduunka. Wadamada sida Kuuriyada Koonfureed, Boqortooyada Ingiriiska, Switzerland iyo Dalalka ...
Nokia waxay ka faa'iideysaneysaa waqtiga xun ee Huawei si ay u ballaariso joogitaankeeda 5G
Dhibaatooyinka ayaa kusii kordhaya shirkadda Huawei. Shirkadda Shiinaha, oo wali fursad u heli karta inay is badbaadiso, ayaa aragta sida iibkeeda ...
Ka soo wacida Isbaanishka iyo Yurub hadda way jaban tahay
Dhowr sano ka hor, meeraysigu wuxuu ku dhex dhintey Midowga Yurub. Tallaabada koowaad ...
Vodafone ayaa 5G keeni doonta Yurub xagaagan
Wadamada qaarkood waxay lahaayeen shabakad 5G oo si buuxda u shaqeyneysa muddo bil ka badan. Kuuriyada Koonfureed waxay ahayd ...
Booliska Qaranka iyo Orange waxay ka digayaan caqabadaha fayraska ee ugu yar
Booliska Qaranka iyo Orange ayaa ah labada dhinac ee bilaabaya qorshahan cusub ee loogu magac daray # PorunusoLovedelatecnología. Waan ogahay…
Google Fi: Shirkadda Google ayaa isku diyaarineysa inay soo gasho Yurub
Saddex sano ka hor Google ayaa shirkad u gaar ah ka sameysay Mareykanka. Waxay ahayd wax ay shirkaddu u samaysay qaab ...
Ka hel 200 Pepe Fibre Pepephone qiimaha ugu fiican
Kuwani waa qiimaha iPhone-ka cusub ee leh Orange
Fiber-ka Pepephone wuxuu hada ku siinayaa labalaab Mb
Heerka Pepephone Inimitable Trio ayaa hadda leh qiimo dhimis
Ku hel Galaxy S8 + iibinta qiimaha aan dhammaadka lahayn ee Yoigo
Heerka aan laga adkaan karin ee Pepephone ayaa lagu heli karaa qiimaha ugu fiican
1 GB oo ah xogta moobilka qiimaha ugu fiican mahadsanid República Móvil
Jazztel's 50Mb fiber fibreetka hadda iib ah
Movistar's 50 MB Fibre Optic Heerka hadda kor u qaadista
MásMóvil waxay soo bandhigeysaa faybradeeda cusub, dalab go'an oo mobilo leh iyadoo kor loo qaadayo qiimaha
Yoigo wuxuu na siinayaa Galaxy S8 oo keydkeedu yahay 300 euro
Kuwani waa heshiisyada MásMóvil ee Black Friday
Ku cusbooneysii casrigaaga Yoigo's Black Friday
Sida loo qandaraasleeyo qiimaha bilaashka ah ee loo yaqaan 'Freedompop 4G' ama sida loo codsado beddelka SIM-ka haddii aad horeyba macaamiil u ahayd
[Cusboonaysiiyay] Trick si loo hagaajiyo xawaaraha Yoigo. (Ku guuleysiga 800 Mhz iyo 2600 Mhz band). Gali si aad u daawato fiidiyaha.
Sida loo joojiyo farriinta codka
Sida looga baxo xubinnimada Ya Voy de Movistar oo aanad u dhiman isku dayga
fonWou: Lambarka taleefankaaga kale ee bilaashka ah
Liiska APN-yada Isbaanishka ugu waaweyn